Sampana Tily – FPMA Toulouse
« Mandehana, manendre tily; Ka izay hitany no aoka holazainy. » Isaia 21 :6
Tamin’ny taom-pankalazana ny faha 50 taonan’ny FPMA Toulouse, 2009 no nitsangana ny Sampana Tily ary Capitole Toulouse no anaram-pivondronana entiny.
Ho an’ny taona 2020 -2021 dia ny teny fanevan’ny sorit’asam-piangonana mihitsy no hanorenan’ny sampana Tily ny fiainany sy ny asany :
« Halalaho ny itoeran’ ny lainao, ary aoka hohenjanina ny ambain-dainao, ka aza avela hisy hiketrona; halavao ny kofehinao, ary aoreno mafy ny tsima-dainao; Fa hitatra any amin’ ny ankavanana sy any amin’ ny ankavia hianao, ary ny taranakao hahazo ny jentilisa, ka dia hasiany mponina ny tanàna lao ». Isaia 54 : 2-3
Ireo zava-kendreny :
Fitaizana ny zaza sy ny tanora amin’ny lafiny ara-moraly, ara-tsaina ary ara-batana ka ny fampianaran’ny Soratra Masina izay ivon’ny fanabeazana kristiana no fototra iaingana.
Fikolokoloana sy famolavolana ny zaza sy ny tanora mba hahatonga azy ireo ho olon-dehibe hanao adidy mendrika ho an’ny tenany, ho an’ny fianakaviany, ho an’ny fiangonana ary ho an’ny fiaraha-monina sy firenena satria fitaizana mikendry ny hahatonga ny tena ho tompon’andraikitry ny tena, tompon’andraikitry ny hafa, ary tompon’andraikitra manoloana an’Andriamanitra
Fitaizana amin’ny asa fanompoana sy fiantrana eo amin’ny fiangonana sy fiaraha-monina.
Fitaizana mikajy sy miaro ny tontolo iainana ka mampitandrina tsara ny zavaboarin’Andriamanitra.
Fandalàna ny kolontsaina malagasy sy frantsay izay tsy mifanohitra amin’ny fampianaran’ny Soratra Masina : hira, dihy, lalao samihafa….
Fitaizana amin’ny faharetana sy fanoloran-tena ka tsy mivadika amin’ny teny nomena koa ny skotisma.
Ireo asa sy hetsika :
Amin’ny alalan’ny LALAO zay manaja ireo lalàna sy fanekena skoto no ampitana ny fanabeazana ,ary matetika dia an-kalamanjana na anaty natiora no hanaovana izany
Fivoriana in-1 isam-bolana. Misy asa takiana manokana amin’ny tsirairay mandritra izay.
Lasim-pivondronana eto amin’ny faritr’i Toulouse sy ny manodidina indray isan-taona .
RNT, Rencontre Nationale Tily, fihaonambe isan-taonan’ny Tilin’ny FPMA
Lasy lehibe manditra ny fotoam-pialan-tsasatra Jolay na Aogositra
Fitaomana ny Fiangonana amin’ny Fankalazana ny fetim-pirenena ny Asabotsy manodidina ny 26 Jona.
Fanohanana ara-bola ny asan’ny fiangonana ka miezaka manao taozavatra na sakafo vokatry ny fianarana nampitain’ireo mpanabe.
Sampana Mavo (louveteaux) : zaza 8 – 12 taona
Sampana Maitso ( éclaireurs) : tanora 12- 16 taona
Sampana Mena (ainés) : 16 taona no miakatra
Ireo Biraon’ny Sampana 2022 -2023
Filoha : RASAMOELY Noro. nanouh.rasamoely@gmail.com
Filoha mpanampy : BARISON Faratiana.
Mpitantsoratra : BARISON Faratiana
Mpitambola : RANDRIAMAMPIONONA Hasina
Tonian’ny Komitim-pivondronana : MANDIMBIARISOA Rina. mandimbirina@gmail.com
« Miaraha mankalaza an’i Jehovah amiko, hiara-manandratra ny anarany isika » Salamo 34:3
Ho fankalazana ny fetim-pirenena malagasy sy fanamarihana ny faha 60 taonan’ny fahaleovantenan’i Madagasikara dia manasa antsika rehetra ny Sampana Tily hiaraka hilalao ny Asabotsy 28 Jona 2020 @ 14h30. Noho ny tsy mbola afahantsika mivorivory anefa dia ho tanterahana amin’ny alalan’ny visioconférence izany ka ampitaina amintsika manaraka ny rohy hifandraisana.
Ny mpianakavy no asaina handray anjara amin’ny lalao isankarazany:
Tononkalo, Quizz Soratra Masina sy fahalalana an’i Madagasikara, hira sy dihy malagasy.
Ataovy vonona tsy lavitra ny fitafiana sy kojakoja malagasy rehetra azonao raisina @ fiatombohan’ny fotoana, toy izany koa ny taratasy, stylo, baiboly
Hisy koa atelier « mofo menakely » . Ireto avy no ilaina : farine, fleur de maïs maïzena, sucre, huile, levure
Dia manantena ny fandraisantsika anjara!